China Isisombululo sePeritoneal Dialysis Solution (CAPD) abavelisi bemveliso kunye nabathengisi | IVEN
Umgca weMveliso yePeritoneal Dialysis Solution
Ukushicilelwa kwengxowa yesisombululo seCAPD, ukuyila, ukugcwalisa nokutywina, ukuwelda ityhubhu, umatshini wokwenza ibhegi yePVC.
Imveliso ye-CAPD Dialysis yokuvelisa iinkqubo
I-peripheral welding ene-mold evulekileyo ephindwe kabini kunye nokuguquguquka kwesikhunta kufakwe iplati yokupholisa, yenza ukuguquguquka kwesikhunta kubushushu obufanayo, kwaye uqinisekise ukuba izixhobo kwinkqubo yokubumba kunye nokuyeka ayiyi kubhaka izinto ezitshisayo; Ukuphuculwa komgangatho wemveliso.
Umbhobho wokufudumeza kunye ne-thermocouple kwi-aluminium ipleyiti yokufudumeza ipleyiti, ukufudumeza kunye nokudlulisa ubushushu ziyafana, ulawulo lobushushu luchanekile, kunciphisa ilahleko yobushushu, ayizukuvela ubushushu boqobo kwaye ibonise ubushushu abuhambelani, ukuze kuqinisekiswe iwelding inqanaba elifanelekileyo.
Ukusetyenziswa kwe-100% kwifilimu, akukho nkunkuma phakathi kweengxowa kunye namaqela.
Ukubumba uyila ngokukodwa. Ingxowa yokugqibela eyenziwe liqela langaphambili iya kusikwa kunye nengxowa yokuqala eyenziwe yeqela lokugqibela. Kulungile xa utsala ifilimu xa wolula iibhegi. Inye kuphela inkqubo enokuqinisekisa ukolulwa kwefilimu kunye nokolulwa kwengxowa kunokwenziwa ngokulandelelana. (kuqinisekiswe ubude bexesha elinye lefilimu phakathi kweqela ngalinye, oko kukuthi akukho nkunkuma phakathi kwamaqela ahlukeneyo-umenzi wasekhaya ukhona kumda wenkunkuma phakathi kweqela ngalinye.)
Xa utshintsha isikhunta ngeenkcukacha ezahlukeneyo zeemveliso, kufuneka kuphela ukutshintsha isikhunta esingaphezulu, isikhunta esingezantsi sisilungelelaniso sokubumba ngokubanzi, esinokugcina kakhulu ixesha lokulungisa iphutha. Ndiyila ngumngundo yenziwa ngezinto ezizodwa kunye nenkqubo ekhethekileyo abavelisi sokubumbela ezizodwa, kuqinisekisa ukuba uphawu kumgangatho kunye nenkonzo ubomi iingxowa million 100.
Ingxowa yeCold Joint Welding & Waste Edge Ukususa iSitishi
Ngokweempawu zentsimbi yeplastiki, i-welding ebandayo kufuneka yamkelwe kwangoko ukuyenza emva kokuwelda kobushushu obuphezulu. Oku kunokuqinisekisa ukomelela kwe-welding yeplastiki kwaye kuzise inkangeleko entle. Ke ngoko, amazibuko e-2 e-welding afuna ukuwelda okubandayo, kunye nobushushu be-welding bobushushu bamanzi okupholisa (15ºC-25ºC), ixesha kunye noxinzelelo luyahlengahlengiswa.
Ngoyilo lobunikazi, isiphelo senkunkuma sisusa isikhululo silula kwaye sinokuthenjwa, ireyithi yokupasa ephezulu ukuya kuthi ga kwi-99% nangaphezulu. Imivalo yesalathiso ephezulu nesezantsi iyayibamba inkunkuma yefilimu emva kokuba ibhegi iyenzile kwaye iyikrazule ngesilinda sesikhokelo, ukugqibezela ibhegi yokwenza. Umda wenkunkuma onxantathu uqokelelwa sisixhobo esikhethekileyo. Inkunkuma ezenzekelayo yokususa isikhululo ayinakuphela kuphela ukunciphisa iziphumo ezibi zokukrazula okwenziweyo, kodwa ikwaqinisekisa ubume beengxowa ezintle.
Sebenzisa i-E + H yokulinganisa imilinganiselo ye-flowmeter kunye nenkqubo yokugcwalisa uxinzelelo oluphezulu.
Impompo yokulawula amaza omoya ilawula uxinzelelo, sebenzisa umbhobho onganyangekiyo kunyango olunobunkunkqele ukuxhuma umbhobho, ulondolozo olulula, akukho ndawo icocayo ifileyo.
Ukugcwaliswa kokuchaneka okuphezulu, akukho bhegi kwaye akukho bhegi ifanelekileyo, akukho kugcwaliswa.
Ukuzalisa iintloko kwamkela ubuchwepheshe be-patent yokutywina umphezulu ogudileyo, akukho nxu lumano namazibuko e-interwall ke akukho kungqubana kokuvelisa amasuntswana; Ikwathintela ukugcwala kwesisombululo esibangelwe kukutshintsha kobungakanani bamazibuko ukwenza amazibuko angatywinwanga ngeentloko zokugcwalisa.
IKhabhinethi yokuLawula uMbane
Yamkela ulawulo lwe-PLC oluphambili kunye nendlela yokudityaniswa kwevalveji, isekethe elula, ukuphendula ngokukhawuleza ukusebenza, ukusebenza okukhuselekileyo nokuthembekileyo. Ukuzalisa indawo kudityaniswe nenxalenye yokutywina kwiyunithi enye, ifuna kuphela inkqubo yolawulo yombane kunye neyunithi yokusebenza komatshini womntu omnye; Ubuncinci umqhubi omnye uncitshisiwe, ukunqanda iziphene ezinjengokungahambelani phakathi kwabaqhubi ababini, kwaye kwandisa ukhuseleko kunye nokuthembeka kwezixhobo.
Ukuchukumisa ukuboniswa kwescreen kwaye kusebenze lonke ulawulo lobushushu ngokuchanekileyo. Ingakumbi inika ukuhla okuncinci ukuqala kunye nokumisa amaxesha, ukunyamezelana kunokuba ± 1 ℃.
Iphaneli yokuprinta ifakelwe kwipleyiti yealuminium nge-S / S stud bolt, thintela umngxunya oshiyekileyo kwipleyiti emva kokusetyenziswa kwexesha elide.
Uluhlu lwefilimu lubekwe ngoxinzelelo olufanayo kumacala ama-4 ukuqinisekisa uxinzelelo lwefilimu kunye nokusebenza ngokugudileyo. Uluhlu lwefilimu kumacala asekhohlo nasekunene zilungiswe yipleyiti yokuma ehlengahlengisiweyo, ukuqinisekisa isantya sokondla kunye nokuchaneka.
Preheating station kunye nesikhululo ubushushu uphawu amkele spring-zilayishwe inaliti probe ukubona ubushushu sokubumbela, ufakelo lula disassembly, uneasy ukwaphuka, ukunyamezelana ngaphakathi ± 0.5 ℃.
Guqula indlela yokubeka uphawu ukukhusela isilinda, thintela ukufudumeza ixesha elide kuyo.
Iingcingo zangaphandle zobungcali, zahlula ucingo ngokulandela ukwahlula okwahlukileyo, ukubonakala okuhle kunye nokugcinwa okufanelekileyo.
Lungisa ukungunda esezantsi, kodwa gcina ipleyiti yokupholisa, ukukhusela ifilimu xa umatshini ucima.
Ukutywinwa kobushushu obujikelezileyo kwamkela ukungunda okukhethekileyo, fakela ipleyiti yokupholisa yokubumba okuphezulu ngentwasahlobo.
Yongeza inkqubo yokondla oluzenzekelayo ukusombulula ingxaki yokubhloka nokujijisana, ukunciphisa amandla abasebenzi. Yongeza ukucocwa komoya kunye nokubuyisela isixhobo ekuphuculeni ukucaca kwemveliso.
Egqithileyo Imveliso ye-Herb Extraction Production (Artemisinin extraction, CBD extraction)
Okulandelayo: Umgca weemveliso zeSisombululo seHemodialysis
Isisombululo sePeritoneal Dialysis Solution, capd, umgca wemveliso, umgca wemveliso yeCAPD Dialysis
Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer,